Wholesale Weak acid cation exchange resin Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Iyo Weak Acid Cation (WAC) resini inogadzirwa neacrylonitrile uye divinylbenzene uye kuidzvora ne sulfuric acid kana Sodium hydroxide.
Dongli kambani inogona kupa macroporous WAC resini neakasiyana crosslink uye gradings anosanganisira Na fomu, yunifomu yezvimedu size uye chikafu giredhi.
Asina simba Acid Cation Resins
Resins Chimiro chePolymer Matrix Chitarisiko Fomu Kuonekwa RinoshandaBoka Ionic Fomu Yakazara Shanduro Simba meq / ml muH Mhepo Yemukati Particle Saizi mm KuzvimbaH → Na Max. Kutumira Kurema g / L
GC113 Gel mhando Polyacrylic ine DVB Bvisa Spherical Beads R-COOH H 4.0 44-53% 0.3-1.2 45-65% 750
MC113 Macroporous Polyacrylic DVB Mvura yakanyorova Opaque R-COOH H 4.2 45-52% 0.3-1.2 45-65% 750
D152 Macroporous Polyacrylic DVB Mvura yakanyorova Opaque R-COOH Na 2.0 60-70% 0.3-1.2 50-55% 770
Asina kusimba asidi cation yekutsinhana nebwe rudzi rweinesein ine isina kusimba asidhi yekutsinhana mapoka: carboxyl COOH, phosphate po2h2 uye phenol.
Inonyanya kushandiswa pakurapa kwemvura, kupatsanurwa kwezvinhu zvisingawanzoitika, dealkalization uye kupfavisa kwemvura, kubvisa uye kupatsanura kwemishonga inorwisa mabhakitiriya uye amino acids muindasitiri yemishonga.
(1) Iyo isina kusimba acid cation yekutsinhana nebwe ine yakafanana hunhu mumvura. Naizvozvo, kugona kwayo kuora kwazvakarerekera munyu hakuna kusimba (kureva kuti zvinonetsa kupindura nemunyu weasidhi yakasimba anion senge SO42 -, Cl -). Iyo inogona kungoita neisina kusimba acid munyu (munyu ine alkalinity) kuburitsa isina kusimba acid pane yakasimba asidi. Mvura ine yakakwirira alkalinity inogona kurapwa neisina kusimba acid H-mhando kuchinjisa resin. Mushure mekunge macations anoenderana nealkalinity mumvura abviswa zvachose, macations anoenderana neakasimba acid radical mumvura anogona kubviswa neakasimba acid H-mhando shanduko resin.
(2) Nekuti iyo isina kusimba asidi cation yekutsinhana nebwe ine hushamwari hwakakura hweH +, zviri nyore kumutsiridzazve, saka inogona kugadziriswazve nemarara emvura ine simba asidi H-mhando cation yekutsinhana nebwe.
(3) Iko kuchinjana kugona kweasina asidi asidi yekutsinhana resin yakakura kudarika iya yeakasimba acid cation yekutsinhana nebwe.
(4) Weak acid acid cation exchange resin ine yakaderera crosslinking dhigirii uye hombe pores, saka simba remuchina rakaderera pane iro reakasimba acid cation yekutsinhana nebwe.
Izvo zvivakwa zveasina simba acid cation kuchinjisa resin mumvura yakafanana neiyo yeasina simba acid. Iyo ine kusimba kwekudyidzana neyakarerekera munyu (senge SO42 -, Cl - uye imwe yakasimba asidi asion). Iyo inogona kungoita neisina kusimba acid munyu (munyu ine alkalinity) uye kuburitsa isina kusimba acid mushure mekuita. Mvura ine yakakwirira alkalinity inogona kurapwa neakasimba acid H-mhando ion kuchinjisa resin. Mushure mekunge anion anoenderana nealkalinity mumvura abviswa, anion inoenderana neakasimba acid radical inogona kubviswa neakasimba acid H-mhando ion exchange resin.
Nekuti iyo isina kusimba acid cation resin ine hushamwari hwakakura hweH, zviri nyore kumutsiridzazve, saka inogona kugadziriswazve nemarara emvura yakasimba yeasidhi H-mhando anion exchange resin.
Iko kuchinjana kugona kweasina simba acid cation resin ingangoita zvakapetwa kaviri iyo yeakasimba acid cation resin. Nekuti iyo yekuyambuka dhigirii isina kusimba acid cation resin yakaderera, ayo mehendi simba akaderera pane ayo akasimba acid cation nebwe.
Munyu mhando isina kusimba acid cation resin ine hydrolysis kugona.
Pashure: Yakasimba base anion exchange resin
Zvadaro: Yakasimba acid cation yekuchinjana resin